Shirkadda Tamarta Dab-dhalinta Firdhir-Bixinta Lahaansho-Dheeraad ah - Tamarta Ku-Saleysan
Home > Diyaarinta Boostada ee lacag la'aanta ah
Happy Energy waxay la shaqeyneysey Firebird, si ay u siiso injineeriyayaasheeda kuleylka si ay u helaan qorshe maalgalin lacageed oo badan oo miisaaniyad ah kaas oo u oggolaan kara rakibayaasha inay u soo bandhigaan macaamiisha saliida Firebird si buuxda oo bilaash ah. Iyadoo loo marayo Shirkadda Tamarta Shirkadda, ama ECO, shirkadaha tamarta waxay ku qasban yihiin inay bixiyaan deeqo qoysaska qaata faa'iidooyinka si kor loogu qaado boorsooyinka iyo kululaynta. Hadda, thanks to this iskaashigaan cusub, waxaad ku siin kartaa macaamiisha u gaar ah boorsooyinka saliidda iyo mustaqbalka, deeqda ku saabsan kharashka Firfircoolamoolada biomass iyo mashiinnada hawada kulul ee kulul.
Sidee boorashka bilaashka ahi u shaqeeyaan?
Dalabku waa inuu keeno kariyiin bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo helaya gargaar, guri gaar loo leeyahay ama si khaas ah loo kireysto (guriyeynta bulshada aan xaq u lahayn). Marka hore, weydii macaamilka haddii ay helaan wax faa'iido leh (fiiri liistada hoose), haddii ay sameeyaan, waxaa laga yaabaa inay xaq u leeyihiin boorsada Firebird oo bilaash ah. Boiligu wuxuu u baahan yahay inuu qaldo ama uu si fiican u shaqeynayo, waxaad u baahan doontaa inaad noo xaqiijiso waxa khaladka ah iyo nooca calaamadaha aad u gartay si aad u aqoonsato. Energy Energy waxay qabataa dhammaan waraaqaha iyo markii la ansixiyay, waxaan kuu soo diri doonnaa dab-dhaliye Firebird oo bilaash ah iyo qalabka caadiga ah ee guriga si aad u timaado ka hor 10am maalinta maalinta rakibidda. Iyadoo ku xiran xajmiga guriga, waxaad heli doontaa lacag ah si aad u daboosho kharashka rakibidda, qalabka dharka lagu dhaqdo iyo kontaroolka kuleylka loo baahan yahay.
Macaamiisha kuwee ayaa uqalma?
Macaamiisha helaya faa'idooyinka soo socda waxay badanaa xaq u yeelan karaan bixinta bilaashka ah ee bilaashka ah:
Dammaanadda Lacagta hawlgabka
Kaalmada Shaqada iyo Kaalmada Taageerada Dakhliga
Gunnada Shaqo-doonka ee ku salaysan dakhliga
* Macaamiisha helitaanka Canshuuraha Canshuurta waa inay sidoo kale buuxiyaan shuruudaha dakhliga ee ugu sarreeya. Faahfaahinta tani waa la heli karaa halkan
Imisa ayaa na loo bixiyay rakibidda?
Shirkadda Tamarta waxay ku siinaysaa kuleyliyaha iyo qalabka casriga ah ee bilaashka ah ka dibna khidmadda ayaa lagu bixin doonaa rakibidda iyadoo ku xiran hadba inta uu guriga ku jiro. Guryo aad u yar sida kuwa leh qolka jiifka ama dabaqyada 1 waxay helayaan kaliya kuleylaha bilaashka ah, taas oo macnaheedu tahay inaad u baahan tahay inaad si toos ah uga qaaddid macaamiisha si loogu shaqeeyo rakibidda. Qiimaha rakibidda ayaa kordha marka gurigu uu weynaado. Nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin buuxda oo ku saabsan qiimaha rakibaadda
Maxaan u baahannahay inaan ku darno rakibidda?
Lacagta laguu siiyay waxay dabooli doontaa kharashka rakibaad buuxa si loo daboolo dhammaan xeerarka dhismaha ee hadda iyo shuruudaha Oftec. Waxaad u baahan doontaa inaad soo bandhigto wixii qalab dhar ah oo ay ku jiraan kiimikooyin, tuubooyin iyo fittings iyo kontaroolada kuleylka. Marka shaqada la dhammeeyo, guriga waa inuu lahaadaa ugu yaraan qol heer-kuleyl ah, saacad iyo Muuqaal-hawleedka oo dhan marka laga reebo meel kasta oo agagaarka ah ee heerkulka qolka.
Wixii macluumaad dheeraad ah
Si aad u ogaato wax badan, oo ay ka mid yihiin qiimaha iyo faahfaahinta sida geedi socodka u shaqeynayaan, fadlan buuxi foomka hoosta ah waxaanan la xiriiri doonnaa.